ဘရာဇီး ငှက်ရိုး: ABSDF ကျောင်းသူရဲမေဟောင်း နန်းအောင်ထွေးကြည်ရဲ့ မြောက်ပိုင်းခရီး (၂၁)
ABSDF ကျောင်းသူရဲမေဟောင်း နန်းအောင်ထွေးကြည်ရဲ့ မြောက်ပိုင်းခရီး (၂၁)
by May Thingyan Hein on Thursday, January 3, 2013 at 5:38am ·
အဲဒီဆိုင်ကနေ ညနေကျတော့ အကိုက လာခေါ်တာနဲ့ လိုက်သွားတယ်၊ နောက် အိမ်တအိမ်ကို ရောက်တော့ အကိုက ရှမ်းအမျိုးသားတယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်။ အဲဒီတုန်းက ကျမက ငယ်တာပေါ့ ငယ်တော့ ဦးလေး အရွယ်လောက်ရှိတယ် ပီထွန်းမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ သူကလေ။
ပြီးတော့ သူတို့ပိုင်နယ်မြေထဲကနေ မော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့ သွားရမှာ ၅ နာရီလောက်ကြာမယ် ဆိုတော့ ကျမ လန့်နေပြီ။ ကျမ ဘယ်လိုမှ စစ်ဆေးခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒါနဲ့ပီထွန်းက စဉ်းစားဦးဆိုတော့ စဉ်းစားကြတယ်။
You, Ko Lin Wai Aung, ကိုဝိုင် ဝိုင်ကေ, Soe Lynn and 45 others like this.
Khinn Zaww ဖတ်လို့ကောင်းတယ်.....စိတ်ဝင်စားတယ.်.......
January3at 6:01am · Like
Aungkhing Zin share ပြီအစ်မရေ....
January3at 6:07am · Like
Du Bar စိတ်ဝင်စားသွာပြီး မီမီရေ
January3at 6:12am · Like
Zaw Ye ဗကဘ မဟုတ်ပါ ဗမာပြည် ကွန်မြုးနစ်ပါတီ( ဗကပ )ပါ ဆစ်ဆောင်ပနား လို အသံထွက်ပါတယ်
January3at 6:39am · Edited · Like · 2
May Thingyan Hein ကျေးဇူးပါ၊ ကျမ ရေးတာ မှားသွားတာပါ။
January3at 6:48am · Like · 2
Ko Nay Myo @ Zaw Ye. ဗမာပြည်ကွန်မြူးနစ်ပါတီ
မဟုတ်ပါ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီပါး))
January3at 7:51am via mobile · Like · 2
Hsenghpanamhkok Sai မိူင်းသိင်(Mong/Muang Sing) - မိုင်းဆင်/မိုင်းဆိင် လို့ဖြစ်သင့်ပါတယ်... (မုန်း)ဆိုရင် သျှမ်းပြည်မှာခေါ်တဲ့ မိုင်းကိုင်၊ မိုင်းမိတ်၊မိုင်းပန် တို့နဲ့ အဓိပါယ်ချင်းတူပြီး စာလုံးပေါင်းကွဲနေတာ မကောင်းတဲ့ အရာပါ... မိုင်း(သျှမ်းလို - မိူင်း) ဆိုတာ မြို့ပါ... မိုင်းဆင်(မိုင်းဆိင်)ဆိုတာကလည်း မြို့ဆင်ပါ... လောနိုင်ငံ(Lao P.D.R)မှာ တိုင်းလိ (လိသျှမ်း)အများဆုံးနေထိုင်တဲ့နေရာပါ...
January3at 7:56am · Like · 2
Aung San Myint pl carry on , ,
January3at 8:06am via mobile · Like
Ko Lay ဖတ်လို့တော့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်၊ ဒီခရီးစဉ်ဟာ အင်မတန် အန္တရာယ်များပြီး စွန့်စားခန်းတရပ်လို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။ မမေသင်္ကြဟိန်သာ အသေးစိတ် ခြယ်မှုန်းနိုင်ရင် ကိုယ်တွေ့ဝတ္ထုကောင်းတပုဒ် ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
January3at 10:56am · Like · 1
Ko Lay မမေသင်္ကြန်ဟိန်ရဲ့နာမည်မှာ "န"သတ် ကျကျန်ခဲ့တာ တောင်းပန်ပါတယ်။
January3at 11:00am · Like
May Thingyan Hein ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Ko Lay ရှင့်။ ကျမ ကြိုးစားပြီး ရေးသားပါမယ်၊ ရသရော၊ သုတပါ ပါဝင်တဲ့ ဆောင်းပါး ဖြစ်အောင် ရေးသားပါမယ်ရှင်။
January3at 6:55pm · Like · 2
Si Thu share ပြီအစ်မရေ..
January3at 7:21pm · Like
မိုး စဲ မမေသင်္ကြန်ဟိန်းရေ တကယ်လို့သာ ကြုံကြိုက်လို့ အင်တာဗျူးခွင့်လဲ ရမယ် ဆို အခြားအခြားသော သူများရဲ့ အင်တာဗျူးကိုလဲ စိတ်ဝင်စားစွာ စောင့်မျှော်နေပါတယ်..
January3at 10:32pm · Like · 1
May Thingyan Hein ကျမကတော့ ကိုသံချောင်း၊ ကိုအောင်နိုင်တို့ကစပြီး ကိုလှဆိုင်း၊ကိုသန်းဇော်၊ကိုစိန်အေးတို့တင်မက လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌ ကိုသံခဲအထိ အင်တာဗျူး ခွင့်တောင်းနေတာပါပဲရှင်၊ မရသေးတဲ့အတွက် ကျမလည်း ဘယ်နှယ့်လုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ရမယ် သူတို့လည်းကျမကို အင်တာဗျူး မေးလာလိမ့်မယ် လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ အဲဒီနေ့ကို စောင့်ဖတ်ပေးပါရှင်။
January4at 12:52am · Like · 4
Nay Aung မေသင်္ကြန်ဟိန်းရေးတဲ့မြောက်ပိုင်းအားလုံးဖတ်ပြီးသလောက်ပါ။ ၅၅ယောက်ကိုဦးဆောင်
January4at 5:10am · Like
Nay Aung ထွက်ပြေးတဲ့ကိုမြင့်သိန်းထင်ပါတယ်..သူနဲ့နောက်တဦး..သူတို့ကိုဖြစ်နိုင်ရင် ဗျူးပေးစေချင်ပါတယ်...လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့သူတွေကိုတောင်အပါခေါ်သွားနိုင် တဲ့သူတို့၂ဦးရဲ့အံ့မခန်းစွန့်စားခန်းနဲ့ သူတို့အကြောင်းလေးတွေသိရအောင်ပါ..
January4at 5:15am · Like · 5
Aungmyint Ko တခါတရံ ကျနော်ဟာ ညီမငယ်နဲ့အတူလိုက်မျောနေသလိုပါဘဲ။ ကျေးဇူးပါဘဲ ဟိန် နဲ့ ညီမငယ်။
January4at 8:26am · Like
Posted by ဘရာဇီးငှက်ရိုး at 6:23 PM